चीनको नेपालमा के हो चासो ? « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०७७, सोमबार ११:४५
के भारतीय मिडिया र केही जागिरे अथवा बुद्धिजीवीहरूले भनेजस्तो नेपाल पछिल्लो समय घनघोर चीनपरस्त भएर उसैको ईशारामा अगाडि बढ्दै छ ? यस्तो टिप्पणी त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्दैछन्, जसले न चीनको नीति बुझेका छन्, न नेपालको वास्तविकता नै ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने विषय हो यो । चीन भन्दैछ, हामीले उत्पादन गरिदिने, तर भारतले किनिदिएन भने त्यसको उपादेयता के ? नेपाल भारतसँग जसरी पनि जोडिनै पर्छ । त्यसकारण पैसाभन्दा दुई देशको सम्बन्धलाई महŒव दिऊँ ।
चीनले कहाँ हो कहाँ परको अफ्रिकादेखि अनेकन देशलाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यो देशले टाँसिएको छिमेकीलाई सहयोग गर्नु गाह्रो कुरा होइन । किनभने, नेपालसँग त उसको सबभन्दा संवेदनशील मानिने तिब्बत मामिलादेखि दलाई लामाका गतिविधिसम्म जोडिएको छ । नेपाललाई आधारभूमि बनाएर चीनलाई प्रहार गर्ने युरोपेली–अमेरिकी रणनीति पनि यहींनेर जोडिएका छन् । यसर्थ, नेपाललाई बेखुश बनाउने नीति चीनको होइन । भारतसँगको सानिध्यता नघटाऊ भन्ने नै उसको भनाई पाइन्छ ।
२००६ मा नेपालमा गणतन्त्र आएदेखि नेपाल मामिलामा भारतलाई सामेल गराउँदै टु प्लस वनको मान्यता चीनले अगाडि सारेको हो । यसबीच, विदेश विभागका उपमन्त्री आइ पिङ र लगत्तै प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ ८ घण्टे भ्रमणमा आउनुभयो । प्रधानमन्त्री वेनले त नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार हैन, डेढ लाख मेगावाट भएको बताउँदै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने भन्नुभयो । अर्थात्, चीनको लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्ने र भारतमा बेच्ने । यसका लागि बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारसँग पनि आइ पिङले कुरा गर्नुभयो । चीन त्रिदेशीय साझेदारी चाहन्छ भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले बताउँछ । उसले नेपाललाई भारतविरुद्ध जाऊ भनेकै छैन । तर, भारतमा फरक किसिमको मनोविज्ञान हावी भएको देखिँदै छ ।